Uyenza njani iKhuphiswano lweMidlalo yeKhasino kunye neKhuphoni – CYMRU
No Comments on Uyenza njani iKhuphiswano lweMidlalo yeKhasino kunye neKhuphoni
Ngamanye amaxesha, i-Casinos iya kubonelela ngee-matchplay chips okanye iikhuphoni.
Kodwa isebenza njani kanye loo nto?
I-chip yeplayplay chip yinto ekhasino ekunika ukuba ukhuthaze ukungcakaza. Ayinaxabiso lokwenyani njenge-chip eqhelekileyo yekhasino, ilungile kuphela ngokubeka ukubheja nayo.
Uhlala uvunyelwe ukuba usebenzise ii-chip ezinjalo kubhets yemali, njengokubheja ngokubomvu okanye ukubheja okumnyama kwitafile ye-roulette.
Eyona midlalo ithandwayo yokwamkela iitshipplayplay njengoko iwager ziyibaccarat, craps, kunye neroulette. Apha, uza kufunda ngakumbi malunga neetshipthi zemidlalo yekhasino, iincwadi zokuzonwabisa kunye nokunye.
Kwenzeka ntoni xa udlala umdlalo weChip?
Ukudlala umdlalo we-chip Awunako ukubheja i-chip yomdlalo wokudlala wedwa. Kwakhona, uya kuphulukana ne-chip yomdlalo wokulinganisa ngaphandle kokujongana nesiphumo sokubheja.
Ubeka i- $ 10 ukubheja emnyama, kwaye usebenzisa i- $ 10 matchplay chip xa usenza ukubheja.
Ukuba ibhola iwele kwinombolo emnyama, uya kuphumelela i-20 yeedola. Kuya kufuneka ugcine i-chip yakho ye- $ 10, kanye njengoko ubuya kusoloko usenza, kodwa ulahlekelwe yiphip yeplayplay ngokungakhathali.
Ukuba uchithe ixesha elininzi ungcakaza imali yokwenene kwi-intanethi, le ngqondo ayizukubakho kakhulu. Iyafana nebhonasi yekhasino okanye akukho sipho sediphozithi sokubonelela. Ungafumana ubuninzi bezikhundla kwizibonelelo zebhonasi kwenye indawo yethu.
Iikhuphoni zematshisi kunye neetshipsi zentshukumo
Zithini i coupons zemidlalo?
Ewe, bayinto enye kunye neetshipsi zomdlalo, kodwa baprintwe emaphepheni endaweni yokuba bey chip. (Oko kuya kufuneka kucace, kodwa ngubani owaziyo okubonakalayo kwakhona, kunjalo?)
Kuthekani ngento ebizwa ngokuba “ziintshukumo zentshukumo?”
Ezi zihlala zinikezelwa kwintengiso ekhasino apho ufumana khona ii-chips ezininzi ngemali yakho. Umzekelo, ukuba ufumana ikhasino enikezela ngokunyusa apho ufumana i- $ 125 kwi chips ngeedola ezilikhulu, ezi zibizwa ngokuba ziintshukumo zesenzo.
Kodwa ayifani ngqo neetshipsi eziqhelekileyo zeekhasino. Ukuba ubheja i-chip yesenzo kwaye uphumelele, ufumana i-chip esemgangathweni yokuwina kwakho. Eyona ndlela yokuphelisa i-chip yesenzo kukuphulukana nokubheja; awunakukwazi ukuyikhupha imali ngokungathi unomdla rhoqo kwi-chip.
Ukuba uthanda wonke umntu ongcakazayo wekhasino, nangona kunjalo, uza kujikeleza iichipsi ziphumelele kwaye ulahlekelwe.
Ngokusisiseko, nge- $ 100, ufumana u- $ 125 oxabisa isenzo.
Into kuphela ekufuneka uyikhumbule malunga neentshukumo zentshukumo kukuba kufuneka usoloko ubheja kuqala. Ukuba ubheja iichipu zokwenyani ngaphambi kwentshukumo yakho yentshukumo, wenza impazamo enkulu kuba awufuni kuphulukana neetshipi onokuzitshintshiselana ngemali yokwenene.
Ndikhe ndabona iitshipsi zentshukumo ekubhekiswa kuzo njenge “ii-non-negotiable” okanye “ii-chips ezingezizo ezonanto.” Ndikhe ndibabone bebizwa ngokuba “zii-chips ezifileyo.”
Tshatisa ii-Chips kunye nokuBheja iibheji zakho ngeAkhawunti
Eyona ndlela ilula yokufumana ukubamba ngengqondo malunga nendlela ii-matchplay chips ezisebenza ngayo kukucinga ngento enokwenzeka ukuba wena kunye neqela lakho niza kudlala kunye.
Umzekelo, unokubheja i- $ 50 emnyama kunye ne-chip yeedola ezingama- $ 50. Ukuba uphumelele, ufumana i- $ 100 kwii-winnings.
Umntu oza kudlala naye unokubheja i- $ 75 ebomvu. Oku kuya kuqubisana nelahleko yakho ukuba ungabi mnyama.
Ngaphandle kokuba kukhuphuke elinye lamanani amabini aluhlaza, uqinisekisile inzuzo engama- $ 25 phakathi kwenu nobabini ngandlela thile.
Unokusebenzisa eli qhinga linye “ukubhebhetheka ubhejo” nge-baccarat ngokubheja i- $ 50 kumdlali kwaye ngokubheja naye ubeke i- $ 75 kwibhanki. Okanye unokubheja i- $ 50 kumgca wokudlulela kwizikhuba kwaye ukubheja kwakho kudibane ne- $ 75 kumgca wokuphumelela.
Kuya kufuneka uqaphele ukuba akukho nanye kwezi ndlela “jonga ukubheja kwakho” isebenza nge-100% yexesha. Ezi aziqinisekanga ngobuchule bokwenza imali kuba indlu ihlala ine-mathematics.
Umzekelo, kwi-baccarat, ukuba kukho iqhosha lokubopha, wena kunye neqabane lakho bobabini niphulukene nokubheja.
Kwi-craps, ukuba i-shooter iqengqele u-12 kuluhlu oluphumayo, nobabini niyaphulukana nokubheja.
Ukanti, le inokuba yeyona ndlela imnandi yokusebenzisa ukubheja komdlalo ukuba ungcakaza ekhasino nomhlobo.
Yintoni iincwadi zokuNwaba?
Uhlala ufumana iikhuphoni zematshisi xa ufumana incwadi emnandi … Kodwa yiphi le ncwadi imnandi? Ndiqinisekile ukuba ukhe wayibona ngaphambili!
Yincwadi yamaphetshana avela ekhasino. Ihlala ibonelela ngezinto ngaphandle kwe-matchplay coupon, nazo. Ngamanye amaxesha, iikhuphoni zilungele iziselo zasimahla. Ngamanye amaxesha, unokufumana isidlo sangokuhlwa ngexabiso lesiqingatha okanye ukuthenga-enye-yasimahla.
Yinto eqhelekileyo ukufumana amatikiti asezantsi okanye ancitshisiweyo emiboniso okanye isikethi esifana ne-ballcaps enelogo ye-yekhasino kubo.
I-Chips zeekhasino ezikwi-Intanethi
Amaxesha amaninzi, indlela elula yokufumana incwadi emnandi kukuthatha uhambo ngebhasi ukuya ekhasino. Ezi zikhundla zenzelwe ukuba amaqela abongcakazo atyelele amakhasino.
Kodwa ngamanye amaxesha unokufumana incwadi emnandi evela ekhasino ngokucela enye.
Okokugqibela, unokufumana iincwadi ezimnandi kwiimagazini nakwiiwebhusayithi. Umdlali weKhasino udla ngokupapasha iincwadi ezinjalo. Isikhokelo seKhasino yaseMelika sikwangumthombo olungileyo weencwadi zokuzonwabisa.
Kodwa eyona ndawo ifanelekileyo yokufumana iincwadi ezimnandi kukusebenzisa uMcebisi waseLas Vegas. Le nkonzo-yokuthenga kuphela isebenzisa ngokukhethekileyo ekunciphiseni izaphulelo ezilungileyo kwaye ibenze bafumaneke kubathengi bengcakazo
← Ngaba uHlobo lweMigca lusebenza kuMndilili kaJoe? → Indlela Yokuziva NjengoPro kwiKhasino (Nokuba iliLungelo lakho lokuQala)